Iyo ... sidee ayey Android ugu socotaa dhismooyinka kale? | Laga soo bilaabo Linux
Iyo… sidee ayey Android ugu socotaa dhismooyinka kale?
Android Waxay inta badan socodsiineysaa qalabka ku saleysan ARM, laakiin waxaa jira iskudayo lagu keenayo dhuftoyada kale. Midkood waa madal caan ah oo caan ah oo loo yaqaan 'x86 platform' oo ay adeegsadaan kombiyuutarro badan iyo kumbuyuutarrada gacanta, midka kalena waa MIPS, taas oo loo adeegsado inta badan nidaamyada Linux-ku-saleysan ee gundhigga ah, iyo beryahan dambe Android.
Intel horaa na tusay Sanjabiil ku socda Atom Medfield, oo loo qorsheeyay wax soo saar intii lagu jiray qeybtii hore ee 2012. Dhex dhexaad Waa 32nm SoC oo loo maleynayo inuu yahay xalka Intel x86 ee casriga / kiniiniyada, laakiin sidoo kale Intel ayaa sheegay inay ka waxtar badan tahay processor-rada ARM hadda, waxa aan weli caddayn waa sida loo barbar dhigo xalalka kale ee ARM SoC, sida kuwa leh krait laga bilaabo Qualcomm, oo sidoo kale loo qorsheeyay in la gaarsiiyo horaantii 2012.
Alec gefrides, oo maamusha Xafiiska Barnaamijka Google, dhawaaqay que «waxaa jiray nooc ka mid ah Android 4.0 oo loogu talagalay Medfield shaqooyinka hal maalin ka dib markii Google ay sii deysay koodhka ilaha OS, haddase baakado loogu talagalay taleefannada casriga ah iyo kiniiniyada ay wataan wadayaasha Medfield ayaa loo heli karaa soo saarayaasha qalabka.“Gefrides waxay intaas ku dartay in darawallada ay noqon doonaan il furan markii qalabkooda laga helo suuqa, si looga fogaado kala-goynta Android.
Dhanka kale, koox xamaasad leh oo uu hogaaminayo Chih-Wei Huang ayaa ka shaqeeyay gudbinta noocyo kala duwan oo Android ah oo loogu talagay x86 dhufto ee kala duwan. Qaar ka mid ah dekadihii hore way qiimo beeleen, laakiin kuwa kale waa la heli karaa, oo ay ku jiraan Sanjabiilka, Honeycomb, iyo ICS. Huang wuxuu u gudbiyay Honeycomb illaa x86 kaligiis, maxaa yeelay Google ma furin furaha ilaha xilligan, laakiin wuxuu marin u lahaa koodhka shirkadiisuna waa lamaane Google Sida ICS, fiidiyow, cod, kamarad, iyo dardargelinta qalabka Ethernet weli ma shaqeynayaan. Dhibaatada ugu weyn waxay umuuqataa darawal la’aanta.
Huang waa la wareystay, oo aan halkaan uga tagayo qormooyin ka mid ah:
InfoQ: Waa maxay xaaladda ICS / x86? Maxaa ilaa hada la qabtay, maxaase wali u baahan in la qabto?
CWH: Waxaan geynay ICS android-4.0.1_r1 barxada x86 ee mashiinada kaladuwan, sidoo kale waxaan u sii deynay koodhka ilaha dadweynaha. Si kastaba ha noqotee, marka laga reebo barnaamijka AMD Brazos, kombiyuutarrada kale ee ku yaal barta Intel ma shaqeynayaan cilad kaarka fiidiyaha awgeed. Weli waxaan dhib ku qabnaa helitaanka xawaaraha qalabka Intel inuu si sax ah u shaqeeyo. Wi-Fi iyo isku xirnaan badan oo ka imanaya iibiyeyaasha qaarkood waa inay si fiican u shaqeeyaan. Dhawaqa, kamarada iyo Ethernet wali ma shaqeynayaan.
Waxaan tijaabinay GMS (barnaamijyada Google sida GMail, Google Maps iyo Suuqa) iyo sidoo kale cayaaraha qaar (tusaale ahaan difaacaha iyo jeex miraha), sifiican ayeyna u shaqeeyeen.
InfoQ: Waqti intee le'eg iyo shaqaale ah ayaad u maleyneysaa inaad u baahan tahay inaad sidato Honeycomb? Intee in le'eg ayaad u malaynaysaa inay qaadanayso qaadista ICS?
CWH: Taasi waxay kuxirantahay hadafka dekeddu. Waxa igu adkaatay qaadida Malabka, maxaa yeelay markii hore ma ahayn Isha Furan. Waan awooday inaan qabsado koodhka Honeycomb tan iyo markii shirkaddaydu lammaane ka ahayd Google, laakiin dhibaatadu waxay tahay inaan la wadaagi kari waayey koodhkan, sidaa darteed waxaan muddo dheer ku qaatay inaan si buuxda keligay u shaqeeyo. Nasiib wanaag ICS waa Isha Furan, waxayna leedahay taageero x86 fiican. Waxaan si guul leh u keenay Hub oo leh dardargelinta qalabka laba toddobaad oo keliya. Laakiin weli waxaa jira dhibaatooyin qaar (sidaan kor ku sheegay) in la xalliyo. Sidoo kale, maadaama tan lagu horumarinayo waqtigayga firaaqada, way adag tahay in dhab ahaan la bixiyo waqtiga kama dambaysta ah ama la sheego goorta ay diyaar noqonayso, si kastaba ha noqotee, waxaan rajeynayaa in bulshada Open Source ay gacan ka geysan doonaan xallinta dhibaatooyinkaan si ka dhakhso badan sidii ay ku ahayd Honeycomb .
InfoQ: Maxay yihiin caqabadaha ugu waaweyn marka loo dirayo Android ilaa x86?
CWH: Horumar la’aan. Dhab ahaantii soosaaraha kaliya ee firfircoon tan iyo markii mashruuca la bilaabay (Juun 2009) waa aniga. Waxaan haynaa ku dhowaad 2600 oo qof oo ka diiwaangashan liiskayaga boostada, laakiin aad u yar ayaa ku biira horumarka sida. Qaarkood way ku biireen ka dibna way ka baxeen mashruuca, sababtuna waxay tahay iyaga oo aan haysan waqti ay ku heli karaan ama xiisaha oo ka lumay. Nasiib wanaagse, waxaan saaxiibo wanaagsan ku leeyahay bulshada Open Source, kuwaas oo ku fiican dhinacyada farsamada qaarkood mar walbana diyaar u ah inay i caawiyaan. Tusaale ahaan, Chia-I Wu oo ku yaal OpenGL ES iyo Benjamin oo ku socda darawallada taabashada. Kii ugu cusbaa ayaa soo gala goobta si aad su'aalo u weydiiso, marar badan adigoon bixin macluumaad farsamo oo ku filan, markaa ma caawin karo, laakiin taasi maahan ... inkasta oo ay bixiyaan macluumaad ku filan, marar badan ma haysto aaladda ay hayaan, sidaa darteed anigu ma sameyn karo tijaabin iyo dib-u-hagaajin sidaa darteed arrimahaaga weli lama xallin. Sidoo kale, iibiyeyaasha qaarkood sida xirmooyinka Viewsonic iyo Insyde oo iibiya badeecadaha Android-x86, laakiin waligood waxba kuma darsadaan horumarka, kana fog. Tani waxay naga dhigeysaa inaan dareemno murugo iyo xanaaq. Intel annaga nama daneeyo, iyagu waxay leeyihiin nashqad u gaar ah oo ah Android ay iyagu iskiis u soo saareen, laakiin waligood cid walba uma sii dayaan Tani waxay si cad nooga dhigeysaa jahwareer. AMD waxay nalashaqeeysay dhawaan, laakiin wali waxay kujiraan marxaladihii hore. Waxaan rajeyneynaa inaan aragno tabarucaad dheeri ah iyaga mustaqbalka.
InfoQ: Ma jiraan wax qorshe ah oo ka socda AMD ama shirkad kale oo ay ku isticmaali karto dekeddahaaga?
CWH: Waxaan u maleynayaa sidaas, laakiin sida caadiga ah waxba nama sheegi doonaan.
Sida for MIPS, shirkaddu waxay u wareejisay dhammaan noocyadii hore ee Android qaabkeeda processor-ka, waxayna qorsheyneysaa inay sii deyso dekedda ICS bartamaha bishan. Android 4.0 wuxuu ku saleysan yahay Linux 3.0.8 kernel, helitaanka kernelkan inuu ka shaqeeyo MIPS horay ayaa loo gaaray, markaa waqti dheer ma qaadaneyso inaad ku aragto ICS barnaamijkaaga RISC.
Maqaalka halkan ayuu ku egyahay 🙂
Wadada buuxda ee maqaalka: Laga soo bilaabo Linux » GNU / Linux » Iyo… sidee ayey Android ugu socotaa dhismooyinka kale?
War wanaagsan: D, shaki yar baan qabaa, waa run android waa "Amaan darro weyn" (dibedda, malware, iwm) mise waxay yihiin mala awaal si ay u burburiyaan horumarkiisa?
Ma aanan helin fursad aan ku tijaabiyo, ma haysto kiniin ama taleefan casri ah: S. Waxaan jeclaan lahaa dhagayste 😀
Uff ... waxaad weydiineysaa ugu yaraan tilmaamey HAHA. Tan ugu "sareysa" ee aan awoodo inaan gaaro marka laga hadlayo dhanka Taleefoonada casriga ah, waa inaan helo Nokia N70-kayga fudud, oo aan ku riyoonin Android LOL !!!
Dib-u-dhiska Weligay ma maqlin, laakiin khayaanada ayaa ka jirta, sida ay ku dhacdo mashruuc kasta oo kale. Faahfaahinta ayaa ah in Android ay tahay Source Furan, laakiin intaas kaliya maahan, Suuqa Android bilowgiisii ​​wuxuu sameeyay qollo badan oo loogu tala galay khayaanada, waxyarna waxay usii kordhiyeen shuruudihii ay u baahnaayeen iyo faahfaahin kale, sheekadan waxay la mid tahay wixii ku dhacay Firefox iyo khayaanadaada addons in yar dib.
Isku soo wada duuboo, maalmahan Android waa (ra'yigeyga sida iska cad) doorashada ugu fiican ee suurto galka ah, kaliya maahan maxaa yeelay waxay dhaaftaa inta kale ee OS ... laakiin maxaa yeelay, kaalay ... waxay leedahay mustaqbal rajo badan leh hadana
Nah, maahan wax badan. Kawaran haddii uu jiro fure, laakiin aad u yar ... waxaa jira oo keliya 3% fursad aad ku heli karto qaar, iyo haddii aad ku bixiso bogagga sida El Androide Libre, in ka yar 1%. Laakiin waxaa jira "Trojan" oo ay dejiyeen hawl wadeennada Mareykanka, oo loo yaqaan Carrier IQ, kaas oo garan kara wax kasta oo aad sameyso (taxaddar, kaliya waxay ku ridayaan Mareykanka). Haye, waa qiimaha ay tahay inaad iska bixiso il furan (?
Hagaag layaab malahan in mashruuca x86 uu umuuqdo badh laga tagay. Waxaan ku tijaabiyey Honeycomb mashiin kumbuyuutareed ah waxayna muujineysaa shaqada ugu fiican ee la qabsiga taabashada iyo darawalka fiidiyowga si loogu daro netbooks.
Waxaan hayaa taleefanka gacanta oo wata Android 2.1 waxaanan kuu sheegi karaa inay jirto khatar malware, maxaa yeelay markaad rakibayso barnaamijyadu waxay waydiisataa rukhsad mana ogid goorta aad isticmaaleyso. In kasta oo ay iyaduna ku xidhan tahay barnaamijka aad suuqa kala soo baxdo, haddana isku mid maaha inaad kala soo degto Shimbiraha Xanaaqsan marka loo eego kuwa kale ee laga xado furayaasha Wi-Fi. Dhammaan waxay kuxirantahay nooca barnaamijka aan soo dejino.
TuxInfo Magazine Nro. 43 oo diyaar u ah soo dejin